Ala Nigeria Ahọpụtala Ndị Gọvanọ Na Ndị Omebe Iwu Steeti Dị Iche Iche
Nhọpụta a bụ nke weere ọnọdụ n'abalị iteghete nke ọnwa Maachị ahọ a, ma bụrụkwa nke e mere n'ọtụtụ steeti dị iche iche ụbọchị ahụ. Tupu ya bụ oke ụbọchị, akụkọ dị iche iche malitere kọba n'ebe dị iche iche banyere ihe aghaghị ime na ihe agahị eme na ya bụ ntụliaka, nke mezịrị ka ọtụtụ steeti nọrọ n'oke egwù ma chịrịkwa uche n'aka.
Dịka akụkọ e nwetara site n'ọtụtụ ebe siri kọọ, nhọpụta ahụ bụ nnọọ nke gara n'ụfọdụ ebe dịka ndị mmadụ siri chee, ma gakwa n'ụfọdụ ebe ndị ọzọ n'ụzọ abụghị ka e siri chee ma ọ bụ tụọ anya. E wezùga steeti Anambra, Ondo, Ekiti, Osun na Edo, bụ ebe e mere naanị nhọpụta ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti; e mere nhọpụta ọkwa gọvanọ ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti na steeti iri atọ na otu ndị ọzọ dị n'ala anyị, bụkwa nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche nwetara mmeri na ha.
N'ụfọdụ steeti n'ala anyị, dịka steeti Rivers, Delta, Kastina, Kaduna Ebonyi, Ondo, Oyo na ụfọdụ ebe ndị ọzọ, e nwegasịrị ọtụtụ ihe iche aka mgba, ịkwafù ọbara na ihe ọdachị ndị ọzọ, bụ nke biri nhọpụta ahụ aka ọjọọ na mparagha ebe ahụ. O pekata mpe, mmadụ iri na ise ka e gburu egbu na steeti ndị ahụ, ebe ngwo-ngwo na akụnụba gburu nde kwùrú nde Naịra bụ nke e bibìrì ebibi na ya bụ nhọpụta n'ọtụtụ ebe na steeti dị iche iche.
Otu ọ dị, ntụliaka ahụ bụ nke gara nkè ọma ma gakwa siriri wèrèrè na steeti Anambra karịa ka a tụrụ anya, na-agbanyeghị na e nwekwara ụfọdụ ihe ọdachi dapụtara n'ụfọdụ ime obodo. Dịka ụlọ ọrụ ahụ nchịkọba ọkwa ọchịchị dị n'aka n'ala anyị bụ 'Independent National Electoral Commission' (INEC) sìrì kwe na nkwà tupuu ụbọchị ntụliaka; ntụliaka bidoro nnọọ n'elekere asatọ kpọnkwem n'ọtụtụ ebe dị iche iche na steeti Anambra ahụ, nke gụnyere: Ebenator, Ọsụmenyi, Ụkpọr na Ụtụh (dịgbàdò n'okpuru ọchịchị Nnewi South na steeti ahụ). Otu ọ dị, ịtụ akwụkwọ ebidochaghị n'oge n'ụfọdụ ebe, n'ihi abịaghị n'oge, ngharịpụ nke akụrụnwga e ji enyocha akwụkwọ ikike e ji atụ akwụkwọ, bụ 'Smart Card Reader', na ihe ndị ọzọ (dịka a hụtarana Nnọkwa dị n'okpuru ọchịchị Idemili South na ụfọdụ ebe ndị ọzọ).
N'ihe gbasaara nsonye ndị mmadụ na ya bụ ntụliaka, ọ bụ ihe doro anya, dịka a chọpụtara n'ọtụtụ ebe dị iche iche, na e nwechaghịzị ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ sonyere na nke a dịka e nwere n'oge e mere ntụliaka maka ọkwa onyeisi na ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti, dịka ọtụtụ ndị gbakụtara nke ahụ azụ ma jewara ahịa, ọrụ, igwù mmiri, igwu egwe nakwa ihe ndị ọzọ dị ha mkpa ụbọchị ahụ.
N'ajụjụ ọnụ ndị nta akụkọ gbara ha bànyere nke ahụ, ụfọdụ n'ime ụmụnwaanyị a hụrụ n'ahịa Eke Ọsụmenyi dị na Nnewi South (mgbe ntụliaka na-aga n'ihu), ebe ha na-akwọrọ onwe ha akamụ ma na-ayọchasị nri ọka ha na-ere ere n'ahịa ahụ ụbọchị ahụ, nke gụnyere: oriakụ Fidelia Afọma, oriakụ Uju Mmadụbụọgụ na oriakụ Agnes Ụgbọaja kwuru na o nweghị ihe gbasaara ha na ịtụ akwụkwọ n'ihi na ndị niile na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị wàyo, bụ ndị (dịka ha siri kwuo) ọ na-abụ maadụ tụnyechaara akwụkwọ, ha echezọọ onye ahụ n'ime ahụhụ ya ma na-eri ego gọọmenti naanị ha.
N'akụkọ dịkwa ka ibè ya, n'ajụjụ ọnụ a gbara ha maazị Romanus Obika na Ezeh Amaefuna, bụ ụfọdụ ụmụnwoke a hụrụ n'ọdụ ahịa Nkwọ Akwaihedị ebe ha nọ na-azụ òkwè, na-añụrụ onwe ha mmanya ma na-akọrị akụkọ (dịka ntụliaka na-aga n'ihu); ha kwuru na ndị ọnụ na-eru n'okwu edechaalarị mpụtara ntụliaka ahụ ma debe ya edebe na-echezị ka e mechaa ntụliaka. Ha kwuru na nke ahụ pụtara ìhè na nhọpụta izugbe onyeisi ala ha sònyere na ya, bụ nke ha sị na ọ bụghị onye kwesiri ituru ùgò tuuru ùgò na ya, ma kwèrezie n'ihi ya kwuo na onye ga-eturu ùgò na nhọpụta nke ụbọchị ahụ ga-eturu ùgò, ebe onye ga-ada ada ga-adara onwe ya, ma ha ọtụrụ akwụkwọ ma ha atụghị, n'ihi na ịtụ akwụkwọ ha enweghị mgbanwe ọ ga-eweta na mpụtara nhọpụta ọchịchị ahụ.
N'ihe gbasaara ọdachi, e nwere ụfọdụ ihe iche aka mgba, nsògbu na ọgbagara dapụtara n'ụfọdụ ebe, nke gụnyere Akwaihedị, ebe a sụkasịrị ụfọdụ mmadụ mmà ma merụọkwa ụfọdụ ahụ ebe ha gara ịtụ akwụkwọ; na Obosi dị n'Idemili North, bụ ebe e gbùrù mmadụ abụọ ma merụọkwa ọtụtụ ahụ ụbọchị ahụ, tinyere ụfọdụ ebe ndị ọzọ.
N'ebe o metụtara mpụtara atụmakwụkwọ ahụ na ya bụ steeti, otu ndọrọndọrọ niile sonyere na asọmpi ahụ lụrụ nnọọ ọgụ ahụ dịka nwoke, ma otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance (APGA) gosiri ihe o jiri bụrụ ọka ibè site n'ịzachakọ na inweta mmeri n'ọgbọ nta nkwàdo iri abụọ na anọ n'ime ọgbọ nta nkwàdo iri atọ e nwere na ya bụ steeti, ebe otu ndọrọ ndọrọ People's Democratic Party (PDP) werezịrị isii fọrọ afọ.
Ọgbọ nta nkwàdo niile ahụ na otu e siri nweta mmeri na ha gụnyere:
Anaocha I PDP.
Anaocha II APGA
Awka North APGA
Awka South I APGA
Awka South II APGA
Idemmili North APGA
Idemmili South APGA
Njikoka I APGA
Njikoka II APGA
Anambra West APGA
Anambra East APGA
Onitsha NORTH I PDP
Onitsha NORTH II APGA
Onitsha South I APGA
Onitsha South II APGA
Ogbaru I PDP
Ogbaru II PDP
Aguata I APGA
Aguata II APGA
Ihiala I APGA
Ihiala II APGA
Nnewi North APGA
Nnewi South I APGA
Nnewi South II PDP
Orumba North APGA
Orumba South APGA